Dowlada Sucuudiga oo markii ugu horeysay qiratay dilka Jamal Khashgooji – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Sucuudiga oo markii ugu horeysay qiratay dilka Jamal Khashgooji
Warbaahinta dowladda Sucuudiga ayaa sheegtay in Jamal Khashgooji oo in muda ah la la`aa uu geeriyooday kadib markii uu ku dhintay dagaal ka dhacay qunsuliyada sacuudiga ee magaalada istanbuul xili uu ku sugnaa halkaasi.
Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in Jamal Khashgooji ku dhintay dagaal qunsuliyada gudaheeda ku dhaxmaray isaga iyo dad joogay qunsuliyada.
Xukuumadda Sucuudiga ayaa waxay shaqada ka ceyrisay Axmed Al-Caasiri oo ahaay ku xigeenka sirdoonka iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee sacuudiga Al Qaxdhaani.
Hasa ahaatee mas`uuliyiintan shaqada laga ceyriyay ayaa iska fogeeyay inay wax ka ogyihiin dilka Jamal Khashgooji.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay waxa dhacay in aan la aqbali doonin balse saaxib dhaw la yahay sacuudiga.
Sidoo kale Trump ayaa shaqsiyaadka la xiray ku tilmaamay talaaba muhiim ah oo loo qaaday isagoona dowlada sacuudiga ku amaanay tallaabada deg deg ah ee ay qaadeen.
Madaxweyne Trump ayaa intaa ku daray inkastoo cunaqabateyntu ay tahay talaabo u furan Mareykanka hadana tallaabooynkaasi ay aad u dhaawaceyso dhaqaalaha Mareykanka.
Dowlada Mareykanka ayaa horey u sheegtay in hadii sacuudiga ay ku cadaadto dilka saxafigan ay cawaaqib xun kala kulmi doonto.
Waa markii ugu horreysay ay dowlada Sucuudiga qirto inay ka dambeeysay dilka weriye Jamaal Kashgooji.
boqorka sacuudiga boqor salman ayaa amar ku bixiyay in la sameeyo gudi wasaaradeed oo uu hogaamiya ka yahay dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed Bin Salmaan si dib u habayn loogu sameeyay hay’adda sirdoonka qaranka.
Warkan lagu daabacay wakaalada wararka ee Sacuudiga ayaa ka dambeeyay wax yar uun ka dib markii boqor Salman khadka taleefonka kula xiriiray madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si uu arrintan uga kala hadlo.
Sacuudiga ayaa waxaa baaritaanada ka saacideeyay macluumaad sirdoon ah ay soo gudbiyeen Turkiga.
Jamaal Kashgooji ayaa dad ugu war dambeysay labadii bishan xilli uu waraaqo ku sabsan guur ka soo qaadanaayay qunsuliyada sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Booliska wadanka Turkiga ayaa waxay baaritaano xoogan ka wadeen gudaha qunsuliyada sacuudiga iyadoo saraakiil aan magacyadooda la sheegin ay shegeen in meydka Jamal weriyaha lagu tuuray kayn halkaasi ku taalla.
Bayaan kasoo baxay xafiiska dacwad oogida guud ee dowladda sacuudiga ayaa lagu sheegay in dagaal qunsuliyada ku dhexmaray weriye Jamaal Kashgooji iyo dad halkaasi ku sugnaa ay dhalisay dhimashadiisa.
Waxaa sidoo kale bayaanka dacwad oogida lagu sheegay in 18 qof oo u dhashay sacuudiga xabsiga la dhigay.
Sacuud Al-Qaxddaani waa la taliyaha boqortooyada sidoo kslena ahla taliyaha gaarka ee dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
← Liibiya oo ka hor imaatay qorshaha mdiowga Yurub ee lagu xakameynayo muhaajiriinta
Sarkaal ka tirsan ciidamada GSU-da oo loo soo xiray dilkii loo geystay Monica Kimani. →